Waa tan sida aydaan ugu gubin Suuqgeynta Saameynta | Martech Zone
Waxaan horey uga qornay dabinada suuq geynta saamaynta. Sida mid ka mid ah magdhowga waqti ka waqti sidii saameyn, Waan ka shakisanahay inta saamaynaysa xidhiidhada suuq-geynta.
Xaaladda marka la eego, horaantii sanadkan ayaa la igu casuumay Beerta-birta maxaa yeelay waxaan ahay qof maxalli ah saameyn baraha bulshada. Waxaa jiray koox dad ah oo laga casuumay warbaahinta bulshada - dhammaantoodna leh dhibco sarre oo leh mashiinka dhibcaha saamaynta caanka ah Indianapolis. Wadadu waxay bixisay kaarro dhigasho iyo tikidhada safarka waxayna la baxeen dhammaan dhacdada. Xaqiiqdii ma aanan tagin - waxaan isku dhacay daqiiqadii ugu dambeysay.
Mid ka mid ah asxaabteyda ayaa aaday oo wuxuu ku kaftamay sida, hal mar, darawal caan ah uu ag maray iyaga oo cidina xitaa aysan ogeyn… waa inay weydiiyaan cidda uu yahay ka hor inta aysan sawirrada qaar ku tuurin baraha bulshada. Waa maxay buste! Ololaha saameynta ayaa ku seegay dhammaan dhululubada (hel)? Waxaanan runtii isku dayay inaan la xiriiro wadada xilligii la igu casuumay si aan u hubiyo inaysan lacagtooda khasaarin. Qofna weligiis iima soo wicin. Xitaa waxaan joogay xaflad aan ka codsaday qof xoogaa ah oo gacan ka geysanaya kor u qaadista wadada… isagana wuu iga xanaaqay.
Waxaa jira 3 cunsur oo gaar ah oo guuleysta istaraatiijiyada suuq geynta saamaynta iyo ololahan dhammaantood waa la seegay:
Ma dhagaystayaasha ciyaarta saamaynta dhagaystayaasha aad isku dayayso inaad la xiriirto? Jidku wuxuu ka fiicnaan lahaa inuu ku martiqaado dadka leh 100 taageerayaal ah oo xiiseynaya tartanka marka loo eego aniga oo leh 30k raacsan oo aanan wax fikrad ah ka helin haddii aan dan ka leeyahay tartanka maxaa yeelay waligey kama hadlin tartanka.
Ma jirtey a sheeko loogu talagalay saameynaha inuu la wadaago oo dhagaystayaashoodu ay isweydiin karaan? Soo bandhigid, cunista cunto bilaash ah, cabitaanka biirka, iyo aadida wadada bilaash maahan sheeko. Waxay noqon laheyd wax cajaa'ib leh in wadada laga hadlo xiriirka qoyska, taariikhda, wadayaasha, teknolojiyadda… wax aan aheyn sawirada biirka.
Ma jirtey a ugu yeer ficil si aad u cabirto saameynta ee ololaha? Hagaag, markaa waxaa laga yaabaa inay kor u kacday xagga codka-maalintaas maxaa yeelay dhammaan kuwan saamaynta ku leh bulshada waxay ka wada hadleen Brickyard. Haha! Gebi ahaanba waan iska kaftamayaa - ma jirin wax kor u kaca ah maxaa yeelay waxaa horey u jiray boqollaal kun oo taageerayaal dhab ah oo ka hadlaya tartanka! Saameeyayaashan waxba iskama badalin.
Haddii hadafku ahaa in dadka laga helo meel ka baxsan taageereyaasha caadiga ah ee wadada, ma caawin. Ma aanan maqal sheeko ku kalifaysa…. dhab ahaantii waxaan maqlay sheeko ka baxsan saaxiibkay oo ku qoslay helitaanka tigidh bilaash ah. Sheekooyinka loo baahnaa in loo sheego waxay ahayd inay iswaafajiyaan xeelado ku xidhan go'aankeenna si aan wax u iibsanno.
Wax badan oo intaa ka badan ayaa la qaban lahaa si loola xisaabtamo dadka halkaas booqday. Waxaa laga yaabaa in buug yare ay ku yeelanayaan shirkooda bulsheed ee soo socda wadada, laga yaabee nambarka sicir-dhimista ee lala wadaago dadka wixii ku saabsan jidka, laga yaabee liistada tweets, cusbooneysiinta iyo duubista sawirrada ee la isku duway si ay ula macaamilaan dadka isticmaala sheekooyinka ku saabsan sababta ay u tagayaan wadada, waxa dhacdooyinka soo socda iyo halka laga iibsado tigidhada.
Haddii aad bixin doontid ama aad wax ka siin doontid saamileyaasha, hubi inay kuu shaqeynayso! Kama soo horjeedo suuq geynta saamaynta gebi ahaanba, waa uun wax fudud inaysan u eegin raadinta saamileyda barta qaar oo aan u wada tuuro tikidhada bilaashka ah. Tani way fiicnaan laheyd!
Tags: alwaaxwadada Indianapolissaamayntasuuqgeynta suuqgeyntaklouttartanka orodka
MyYappyDog: Bulshada CRM ee Wakiilada Guryaha
Ma Ogtahay Farqiga U Dhaxeeya Saxiixa Dijital Iyo Saxeexa E-ga?